Maitiro Ekushandisa Adzooma Kukwirisa Yako Kushambadzira Mishandirapamwe - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Iwe uri pasi kune yako yekupedzisira tsinga? Ungade here chishandiso chinozorerutsa nekugadzirisa zvese zvako? Tauya kuzobatsira. Dzidza maitiro ekurerutsa uye shandisa michina yako yepamhepo yekushambadzira zano ne Adzooma. Isu tinokuratidza maitiro ekugadzirisa akawanda maakaundi munzvimbo imwechete, uwane otomatiki nzwisiso pane zviri kushanda uye chii chinoda kuvandudzwa, uye zvimwe zvakawanda.
1. Adzooma chishandiso chine simba chekugadzira uye kugadzirisa ako epamhepo kushambadzira
Adzooma chishandiso chine simba chekugadzira nekutarisira ako epamhepo kushambadzira. NaAdzooma, unogona kugadzira uye kutumira kushambadza kune akawanda mawebhusaiti, tarisa kushambadzira kwako, uye uone kuti ndedzipi shambadziro dziri kuita zvakanakisa. Iyo zvakare iri nzira huru yekugadzirisa akawanda maakaunzi kubva akasiyana ad netiweki.
Key Takeaway: Adzooma Sanganisa yako mishandirapamwe neakawanda ad netiweki uye masisitimu. Ona uko kushambadza kwako kuri kubudirira zvakanyanya, uye chii chinoda kuvandudzwa. Kana iwe uchida kuvandudza mashandiro ako akabhadharwa epamhepo kushambadzira kana kuwedzera yavo ROI, zvinogona kazhinji kutora maawa kana kunyangwe mazuva kuti uone yakanakisa kutenga kufamba. Kunyange zviri nyore kugadzirisa mashandiro nekungochinja mazwi akakosha kana maURL, kazhinji pane akawanda akasiyana anouya mukutamba. Semuenzaniso, kana yako PPC kushambadzira iine yakakwira bounce mwero, izvo zvinogona kuratidza kushomeka kwemhando traffic. Kuti uwane zvinhu zvikuru zvinokanganisa kushambadza kwako mushandirapamwe uye nezviito zvakanakisa zvaunogona kutora, iwe unozofanirwa kushandura mashoma mashoma zvikamu zvacho.
Adzooma chishandiso chiri nyore kushandisa chinokutendera kuti uite izvozvo chaizvo. NeAdzooma, unogona kugadzira uye kutumira ads kune akawanda akasiyana ad network senge Google Ratidza Network, Facebook Ads Manager, Bing Ads, uye zvimwe zvakawanda. Iyo zvakare inoita kuti iwe utore akati wandei akasiyana maakaundi, kusanganisira matatu akasiyana ad deployment kumishandirapamwe, pamwe nekudzora kutarisisa kune akawanda Ads Manager mishumo. Kuti uite zvese izvi, iwe unozofanirwa kubatanidza mishandirapamwe yako uye mishandirapamwe kune Adzooma. Pane nzira dzakawanda dzakasiyana dzaungashandisa dhata yekushambadza kuti uvandudze mishandirapamwe yako. Imwe sarudzo ndeyekungowedzera mamwe manetwork kuaccount yako woona zvaunogona kunanga uye kusvika vanhu vazhinji nazvo. Nekudaro, kana yako bhizimisi inoda kutariswa ads kuti utaure chaizvo kuti chii gutsikana kugadzira kukanganisa, Adzooma inogona kukubatsira kuti uite izvozvo chaizvo.
2.Nyore, gadzirisa uye gadzirisa yako epamhepo ad kushambadzira neAdzooma
Iwe unogona kuwana zvakawanda kubva pane yako epamhepo kushambadzira mishandirapamwe uchishandisa Adzooma. Heano zvikonzero zvitatu nei uchifanira:
1. Adzooma otomatiki anovandudza mushandirapamwe wako uye anonunura akanyanya ROI.
2. Adzooma inotsikisa kushambadzira kwako kwepamhepo nekugadzirisa makwikwi ako.
3. Adzooma inopa kutonga kwekugadzira pamusoro pechinhu chimwe nechimwe chako digital advertising, kukubatsira iwe kubatana neako vateereri vateereri nenzira iri nyore.
Online advertising ye startups inzira yakanaka yekuwana kukurumidza kudhonza kana uchiziva tambo. Asi kunyangwe iine zano rakanaka uye zvibodzwa zvakajeka, kumisikidza uye kuita mishandirapamwe yekushambadza inogona kuve inopedza nguva. Uri kudzika kusvika kune yako yekupedzisira nerve? Ungade chishandiso chinorerutsa uye nekugadziridza zvese kwauri? Tauya kuzobatsira. Dzidza maitiro ekurerutsa uye otomatiki yako online ad campaign strategy ne Adzooma. Isu tinokuratidza maitiro ekugadzirisa akawanda maakaundi munzvimbo imwechete, uwane otomatiki nzwisiso pane zviri kushanda uye chii chinoda kuvandudzwa, uye zvimwe zvakawanda. Tora account yemahara neAdzooma nhasi kuita nyore, kugadzirisa uye kugadzirisa ako epamhepo kushambadzira macampaign! With Adzooma, iwe unogona kurerutsa uye kugadzirisa ako epamhepo ad mushandirapamwe zano zviri nyore. Isu tinokubatsira iwe kubata akawanda maakaundi munzvimbo imwechete, tora otomatiki nzwisiso pane izvo zviri kushanda uye chii chinoda kuvandudzwa, uye zvimwe zvakawanda! Chinokosha kuziva mashandisiro ekushandisa maturusi anogona kukubatsira kuchengetedza nguva nemari kuitira kuti ugone kushandisa zvakanyanya bhajeti rako. Iwe unogona kuita izvi zviri nyore neAdzooma's kushambadzira manejimendi chikuva, icho chinorerutsa, chinogadzirisa, uye chinogonesa chese chinhu chekushambadzira kwepamhepo kwauri!
3. Ungatanga sei ne Adzooma??
Adzooma chishandiso chikuru chekuongorora makwikwi ako evashambadziro. Izvo zvinokubatsira iwe kuti uone zviri kushandira vako vanokwikwidza uye izvo zvisiri. Ipapo iwe unogona kushandisa iyo nzwisiso kuvandudza yako pachako kushambadzira mishandirapamwe.
Ngatitarisei pamatanho matatu ekutanga nawo Adzooma.
Step 1: Isa iyo Adzooma Chrome yekuwedzera uye iyo Adzooma nharembozha.
(Iyo nharembozha parizvino inowanikwa chete Android uye iOS.)
Step 2: Connect your Google, Facebook, kana Instagram accounts. (Izvi ndizvo zvatichange tichishandisa kugadzira yedu Facebook ad boka.)
Step 3: Dzvanya kuti ugadzire yako yemahara Adzooma nhoroondo.
Tevera zvinokuchidzira, uye iwe unozokurudzirwa kumisikidza account yako. Tichavhara matanho ese ekumisikidza account yako munguva pfupi, asi ita chokwadi chekumisikidza iyo Adzooma Safari yekuwedzera pane yako Chrome browser.
Step 1. Pindai zvenyu Google, Facebook, kana Instagram ruzivo rweakaundi, wobva wadzvanya batanidza.
Step 2. Mirira kwenguva shoma apo iyo setup maitiro painopedza.
Step 3. Adzooma ichatanga kukubvunza mibvunzo kuti umise account yako papeji rekutanga.
Paunenge uine zvidimbu zvese kumisikidzwa nemazvo (zvese zviri kushanda sezvanga zvichitarisirwa), unenge wagadzirira kutanga kumisikidza yako Facebook kushambadza boka. Kutanga, iwe uchazoda kusarudza chinzvimbo cheshambadziro icho chaunoda kurwira. Neboka rekutanga rekushambadzira, isu tichagadzira matatu ma ads. Padanho rinotevera, isu tinotsanangudza zvinoitwa nechimwe chinzvimbo cheshambadziro. Tevere, isu tichaisa bhajeti yemapoka edu ekushambadzira uye titaure Adzooma shambadziro dzatinomhanya. Kutanga, isu tinotsvaga iro kiyi ratakatsanangura mudanho rekutanga, uyezve tobva tashandisa bhajeti ratakatemera iro boka rekushambadzira.
4. Edza kushambadza kwakasiyana paFacebook, Google AdWords, kana LinkedIn
Saka ndeipi nzira yakanaka yekugadzira kushambadzira kunokunda? Bvunzo, bvunzo, bvunzo! Edza misoro dzakasiyana, mifananidzo yakasiyana, uye zvinyorwa zvakasiyana. Edza zvinhu zvakasiyana nekopi yako yekushambadzira uye uone zvinoshanda zvakanyanya. Rangarira kuti iyo chete nzira yekunyatso kuziva kuti ndeipi shambadziro yakanakisa kuyedza akawanda ma ads uye kuona kuti ndeipi inounza iwe kune vakawanda vatengi. Wagadzirira kutanga? Gadzira account ku Adzooma, nyora muyedzo yemahara, uye uchave wakanaka munzira yako yekuita yako yekushambadzira padanho zano mhepo! Unoda rumwe rubatsiro? Chikwata chavo chehunyanzvi chakamira pedyo. Taura nekutaurirana.
????????Mari Shoma. Zvakawanda Revenue Generation !!????????